warkii.com » Shirka Muqdisho: Maxay yihiin qodobada la isku hayo?
Shirka Muqdisho: Maxay yihiin qodobada la isku hayo?
Muqdisho (warkii.com) – Waxaa maalinkii seddaxaad uu Muqdisho shir uga socdaa Madaxweyne Farmaajo, madaxda dowlad goboleedyada iyo guddoomiye Cumar Filish, waxaana jira qodobo la isku hayo oo miiska saran, kuwaas oo wararku ay sheegayaan in la isku mari la’yahay.
Agaasimaha Machadka cilmi barista siyaasadda ee Heritage Cabdirashiid Xaashi oo u waramay BBC ayaa soo bandhigay qodobo haatan miiska u saaran madaxda oo ay tahay in xal loo helo.
“Tan ugu daran, uguna muhiimsan waxay ka taagantahay, yaa maamulaya doorashada? Waxay u baahantahay dad lagu wada kalsoonyahay, oo dowladda dhexe ku kalsoontahay, maamul goboleedyadu ku kalsoonyihiin, xisbiyada kale ku kalsoonyihiin oo loo qaateen ah,” ayuu yiri Agaasimaha Heritage.
“Ra’iisul wasaarihiibaa hadda iyadoon sharci loo marin shaqada laga ceyriyey, guddoomiye Jawaari-baa laga ceyriyay, maamul goboleedyada qaar ayaa doorashooyinkii dhacay ku shubtay, marka Soomaaliya sharci lagama raacdo ee siyaasadbaa badanaa lagu socdaa, hadii marka siyaasad ahaan loo heshiiyo oo la yiraahdo war doorashada ugu macquulsan, ugu dhibka yar uguna xalaalsan aan qabsano oo seddax bilood oo kale dowladan ay ku darsato waa loogu dari karaa, oo haddaba ra’iisul wasaare ma jiro oo mid ku meel gaar ah ayaa shaqadii iska sii wada,” ayuu yiri Cabdirashiid Xaashi Agaasimaha Heritage.